Kavha uye kutumira: ndeapi marudzi aripo uye ari akanakisa | Ehupfumi Zvemari
Encarni Arcoya | 28/05/2021 14:01 | makambani
Paunenge uine bhizinesi uye uchifanirwa kutumira zvigadzirwa kune vatengi, haugari uine A kana B. Ndokunge, hauna mukana wekutumira mubhokisi kana mune hamvuropu. Chaizvoizvo, zviripo mhando zhinji dzekupakata, zvese zviri mumabhokisi uye mu nyaya yemahamvuropu. Uye zvakafanana zvinoenda pakutumira sarudzo. Kwete chete iwe unogona kushandisa Correos, iwe zvakare unayo mazhinji makambani anotakura ayo ane basa rekutora maodha kune avo vanogamuchira.
Kana usati wambomira kuti ufunge nezvazvo kare uye ikozvino iwe unoda kuziva kuti ndeupi kurongedza kwaunogona kushandisa, nzira dzakasiyana dzekuishandisa, kana sarudzo dzaunofanira kutumira zvigadzirwa zvako, pano isu tichataura nezvevese vari pazasi. Nekudaro, iwe unogona kana kufunga kutumirwa senzira yekusiyanisa zvine chekuita nemakwikwi.
1 Nei nzira yezvigadzirwa zvinotumirwa zvinhu
2 Mhando dzekupakata kumakambani
3 Kutumira sarudzo: ndechipi chiri nani?
Nei nzira yezvigadzirwa zvinotumirwa zvinhu
Kana munhu akaisa odha online (kana neimwe nzira ipi inosanganisira kuigashira kumba kana hofisi kuburikidza neyekutumira kana neposvo), tinoziva kuti chidiki chavanogona kutarisa iko kurongedza. Kwavari chakanyanya kukosha ndechekuti zviri mukati. Nekudaro, chokwadi ndechekuti kutarisira izvo "zvekutanga kufungidzira" zvaunoita zvakakosha kana zvakanyanya kukosha sekuchengetedza zviri mukati.
Naizvozvo, kana uchishanda nemapakeji akasiyana, zvakakosha tsvaga iyo inonyanya kukodzera maererano nerudzi rwechigadzirwa chaunoda kutumira; kwete chete kudzivirira kuora, asiwo nekuti iwe unogona kugadzira pfungwa yezvinhu zvinoita kuti munhu adzokere pakutenga zvakare.
Uchishandisa mabhokisi ane mavara, nekambani logo, kana kunyange rakasarudzika ribhoni (rine ruvara, rine zita rekambani, rine ruzivo kana mifananidzo, nezvimwewo) zvinogona kuita sarudzo.
Dambudziko nderekuti, kana zvasvika pakutakura, tinogara tichifunga kuti pane zvingasarudzwa zviviri chete: envelopu kana bhokisi. Asi muchokwadi, kune zvimwe zvakawanda.
Mhando dzekupakata kumakambani
Fungidzira kuti iwe unofanirwa kutumira chigadzirwa. Chinhu chinowanzoitika ndechekuti iwe unofunga kuutumira mubhokisi uye ndizvozvo asi, kana iri diki kwazvo, panzvimbo yebhokisi unogona kufunga bhegi, kana hamvuropu. Kana pamwe iri bhokisi diki. Mumusika wekupakata, pane zvakawanda zvingasarudzwa zvekusarudza kubva. Zvichienderana nezvakanyorwa, iwe unogona kuwana zvinotevera:
Pallets: Ndidzo sarudzo hombe dzinoitisa kuti zvive nyore kufambisa zvinhu zvinorema uchichengetedzwa pamativi ese.
Midziyo: Ndiyo nzira yekutakura yekutengesa kukuru, nekuti tiri kutaura pamusoro pezvinhu zvihombe zvine hunyanzvi uye zvinoshandiswa kutakura zvigadzirwa nepasi, gungwa kana nemhepo.
Zvikwama: Izvo zvakachipa kwazvo, uye mazhinji acho anowanzouya nemabhodhi ekuputira kuchengetedza zviri mukati. Iyo yekupedzisira inokwidza mutengo zvishoma asi mukati mekupakata, iwo ndiwo anodhura zvakanyanya.
Hamvuropu:Nyaya yeemvuropu yakafanana neiri pamusoro. Kune hukuru hwakawanda, hune hukuru kana hushoma kuomarara, nekuputika kwe bubble kuchengetedza zvemukati, nezvimwe. Mutengo waro wakakomberedza iwo wemabhegi sezvo iwo ari akadhura kwazvo. Mazhinji acho akagadzirwa nemapepa ezvisikwa zvakasiyana kana makadhibhokisi (akaomarara kana akapfava, zvinoenderana neukobvu).
Masaga: Masaga akakura kwazvo kupfuura mabhegi kana mahamvuropu, uye kunyangwe iwo achigonawo kugadzirwa nemapepa, unowanzoawana akagadzirwa epurasitiki kana machira. Chinangwa chayo kuchengetedza zviri mukati, ndosaka zvakagadzirwa nematanho akasiyana ayo, kana achinge azadzwa, anovhara.
Inflatable mabhegi: Iyi yekupaka ine hunhu kuti inozadzwa nemhepo ine kumanikidzwa kana yakavharwa, nenzira yekuti inodzivirira zvigadzirwa kuti zvisafamba chero nguva. Paunovhura, mweya unopukunyuka uye chigadzirwa chacho chakamira. Iyo inodhura kupfuura zvakajairwa mabhegi, nekuda kwehurongwa hwainotakura.
Mabhokisi: Iwo mabhokisi nyika yese. Kwete chete kune akajairika makadhibhokisi mabhokisi aunogashira, asi kune mamwe akaomarara, anodziya mabhokisi (anomira kutonhora kana kupisa, modular mabhokisi (kuisa imwe mukati meimwe) ... Izvo zvakachipa ndizvo zvakakosha, ndidzo dzinonyanya kushandiswa nemabhizimusi pamwe chete nemahamvuropu nemasaga.
Kutumira sarudzo: ndechipi chiri nani?
Paunenge iwe waziva mhando dzekupakata, uye sarudzo dzakachipa dzaungasarudza kubva, kutumira ndiyo imwe pfungwa yakakosha yekutarisa. Nekuti hapana Post Office chete; zvakare makambani ekutakura. Uye mukati meizvi, kune zvakawanda zvekusarudza kubva (kwete chete zvinonyanya kuzivikanwa seSeur, MRW, Correos Express, Nacex, DHL, nezvimwewo) asi kune vamwe vasingazivikanwe asi izvo zvinogona kubatsira zvikuru.
Muzhinji, izvo zvaunofanirwa kufunga nezvazvo ndiko kuenda kwezvigadzirwa zvauri kuzotengesa. Kana izvi zvichizogara zviri zvemunyika, ndiko kuti, kutumira kuburikidza nenyika imwechete, unogona kusarudza makambani anofukidza maguta ese uye anokupa iwe mutengo wakanaka; Asi kana zvawatumira zviri zvepasi rese, zvakakodzera kuti utange chibvumirano kana kubatana nekambani kuti utarisane nezvose zviri zvepasirese nezvekunze.
Chii chakachipa kwazvo? Pasina mubvunzo, Post Office. Ramba uchifunga kuti iyi kambani ine sarudzo yekuti vanozvishandira (kunyanya kana vakanyoreswa mune zvimwe zvikamu zveIAE) vanogona kutumira zvigadzirwa nemitengo inodhura. Semuenzaniso, bhuku rinogona kukubhadharira pakati pe3 ne7 euros, rinogona kubhadhara muzvinabhizimusi 30-50 masendi kuti riendese. Kana isuwo tichida kuzvisimbisa, kukwira hakuna kunyanya kukwirira.
Kune rimwe divi, nevatakuri mutengo mutengo unowanzo kuve wakakwirira; Kunyanya kana pakutanga kwebhizinesi rako usina akawanda maodha. Kana paine huwandu hukuru hwekutakura, iyo kambani inopa mutengo unodhura kwazvo, asi kazhinji haina kufanana neCorreos.
Zvino, mumatambudziko ese aya pane zvakanakira nekuipira. Semuenzaniso, muCorreos une dambudziko rekuti, kazhinji, zvigadzirwa hazviuye nenguva, kana kuti zvarasika. Zvichakadaro mu Iwo anotakura anosangana nenguva yakatarwa yekuendesa. Kunyangwe iyo isingaregererwe kubva pakutambura kukanganisa mukutengesa, kuti yakarasika, nezvimwe.
Kupindura kuti ndechipi pane izvi zviri nani kwakaoma. Sezvo zvakanyanya mari, Correos; sezvo inoshanda zvakanyanya, vafambisi. Sarudzo yakanakisa? Ipa mutengi sarudzo. Nenzira iyi, inoita sarudzo zvichienderana nenguva yekumirira kana mutengo unogona kunge uine sevhisi yekutakura.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ehupfumi Zvemari » Negocios » makambani » Kavha uye kutumira: ndeapi marudzi aripo uye ari akanakisa
Yari rodriguez akadaro
Zvakanaka, ndatenda neruzivo.
Pindura kuna Yari Rodriguez